Akwukwo achicha na-eri nri ngwa ngwa ma kwe nkwa! | Nutri Nri
Ọkwụrụ bekee obu nkpuru osisi nwere otutu ihe bara uru nye ahu. Ọ bụ ihe magburu onwe isi iyi nke antioxidants ma ama aha ya nnukwu diuretic Ọ na - enyere aka wepu nsị na adịghị ọcha n’ahụ.
Akwukwo painiapulu bu zuru oke ma dị mma iji dozie ozu na wepu oke mmiri nke na - ebute oke ibu. Otú ọ dị, enweghị nke nri ndị dị mkpa na-eme ka nri a soro kachasị maka ụbọchị 4, ebe ọ bụ na ọ bụghị na ọ nwere ike ịmepụta nnukwu mmebi ahụ ike nke onye kpebiri ịga n'ihu ya. Mgbe ahụ aga m agwa gị okwu karịa nke nri a ma ama ya mere ị pụrụ ịhụ ihe ha bụ abamuru ya na ọghọm ndị ọ nwere.
1 Uru nke nri painiapị
2 Kedu ihe nri painiapị na-atụ aro
3 Akwukwo painiapulu nri
3.1 Ụbọchị mbụ
3.2 Ụbọchị nke abụọ
3.3 Bọchị nke atọ
4 Ọghọm nke painiapulu nri
Uru nke nri painiapị
La painiapulu nri Ọ nwere usoro nke uru ọ dị mkpa ka ị mara na nke nwere ike inyere gị aka ifelata na iwepu kilo ndị ọzọ na-enye gị nsogbu:
Ọ bụ slimming usoro nwere nsonaazụ ozugbo, n'ihi na ịmụrụ nke painiapulu na-enyere aka belata ọzịza na afọ ugbua wepụ abụba a kwakọbara n'ime ahụ.
Painiapulu bu magburu onwe mamịrị ya mere na ọ zuru oke maka Hichaa kpamkpam dum organism. Nri ya na-enyere gị aka iwepụ nsí niile na adịghị ọcha niile nke ahụ dị n'ime ahụ gị.
O bu nkpuru osisi ọtụtụ vitamin nakwa na ọ zuru oke maka ihicha akụkụ dị ka umeji ma obu akuru.
Painiapulu na-enye gị ohere ịkọwapụta ya efere dị iche iche na n'ezie na-atọ ụtọ maka ihe ọ bụ nri mara ezigbo mma ifelata.
Kedu ihe nri painiapị na-atụ aro
Akwukwo painiapulu nri anaghị atụ aro ihe ọ bụla ọzọ karịa eri painiapulu n'oge niile nri nke ụbọchị, supplementing kwuru oriri na ụdị ndị ọzọ nke obere kalori tinyere obere abụba maka ghara ibu ibu na ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma. Typedị nri a na-enye mmadụ ohere sachaa ahụ gị dum, na-ewepu ha niile adịghị ọcha na ihe mkpofu ndị a na-akpụ mgbe ha risịrị nri ọ bụla.
Dị ka nri a si dị, naanị ihe dị ka nri 3 kwa ụbọchị na ha, na mgbakwunye na nke painiapulu anụ ahụ, enwere ike tinye ya na ọtụtụ banyere 400 grams nke dabere-ụdị anụmanụ protein dị ka ọ dị na ọkụkọ, tolotolo, azụ ma ọ bụ oke bekee. Dịka ị pụrụ ịhụ, ụdị nri a nwere ọtụtụ ụkọ erimeri ka a hapụ ya naanị ịgbaso nri a maka oge kachasị elu nke ụbọchị 4. N'ihe banyere ịgbatị usoro a nke ịdị arọ karịa ụbọchị ole na ole, onye a na-ekwu okwu nwere ike ịta ahụhụ nnukwu nsogbu ahụ ike ebe ọ bụ na ọ naghị enye ahụ gị nri ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ nke ọma.
Akwukwo painiapulu nri
Aga m egosi gị ọzọ ịmaatụ menu nke ụdị nri a gụnyere ihe dị ka ụbọchị 3.
N'oge nri ụtụtụ ị nwere ike iri nri Mpekere abụọ nke painiapulu eke yana tost nke achicha dummeal na obere jam.
Maka nri ehihie, ị nwere ike iri mpekere abụọ nke painiapulu anụ ahụ yana anụ ehi jiri obere broccoli sautéed na mmanya na mmanụ.
Na nri abalị ị nwere ike iri abụọ e ghere eghe ara tinyere salad letus na iberibe painiapulu abụọ.
Ụbọchị nke abụọ
Na nri ụtụtụ ị nwere ike iri abụọ kpocha ọka, yogọt skim na mpekere abụọ nke painiapulu.
Maka nri ehihie 200 gram nke salmọn eghere eghe na-esote abụọ painiapulu mpekere.
Na nri abalị ị nwere ike iri salad nke letus na tuna na Mpekere abụọ nke painiapulu.
Bọchị nke atọ
Maka nri ụtụtụ ị nwere ike ịnwe kuki ọka niile, kọfị na mpempe abụọ nke painiapulu anụ.
Maka nri 200 gram nke grilled ara jiri sie akwụkwọ nri na mpekere painiapulu abụọ.
Na nri abalị ị pụrụ ime ka a akwukwo nri ude na celery, atịchok ma ọ bụ asparagus na Mpekere abụọ nke painiapulu.
Ọ bụrụ na ịgbaso atụmatụ a n'ime ụbọchị atọ, ị ga-enweta hichaa ahụ gị dum, ị ga-ezere njigide mmiri na ị ga hapụ ndị mmefu pound ole ha na-enye gị nsogbu. Ọ dị mkpa ka ị cheta nke ahụ ọ bụ nri dị ọcha nakwa na ọ bụ n’ihi nke a ka ọ gaghị anọ karịa ụbọchị atọ.
Ọghọm nke painiapulu nri
Ọ dị mkpa icheta na painiapulu nri nwere ọtụtụ ụkọ nri, ya mere ọ baghị uru ịgbaso ya maka ihe karịrị 4 ụbọchị. Ọ bụ nri na-enyere aka wepụ nsị ahụ na ifelata na a ngwa ngwa ụzọ ma na ekwesighi igbati ogologo oge n’oge.
Ọ bụ nri obere kalori ya mere ị ga-akpachara anya mgbe ọ bịara n’iso ya ebe ọ bụ na ọ naghị enye nri dị mkpa.
A na-ahụta ya dị ka nri ọrụ ebube maka ihe o nwere ihe dị mkpa rebound, ya mere ọ bụrụ n’ịgbanweghi agwa gị, o doro anya na nweta ibu ma were otutu kilos nke furu efu.
Ọ bụghị nri a tụrụ aro ka ọ bụrụ na ọ bụghị ihe amamihe dị na ya maka ndị nwere gbasara akụrụ.
Tupu ị gụchaa, ị ga-echeta nke ahụ maka painiapulu nri na-arụ ọrụ ma ị nwere ike nweta nsonaazụ ndị a tụrụ anya, ozugbo ọ gwụchara kwuru atụmatụ ọnwụ ọnwụ, ị ga-amalite ụdị nri na edozi jikọtara ya na obere mmega ahụ kwa ụbọchị. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ezere na-atụ ụjọ rebound mmetụta ma ị ga-enwe ike ijikwa ibu ahụ. Ndị na-akwado ụdị nri a na-ekwu na ọ ga-efu ya ihe dị ka kilogram 2 n’ibu n’ime ụbọchị atọ, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ị jụọ nye onye na-edozi ahụ ma ọ bụ ọkachamara tupu ịmalite nri a ma si otú a zere nnukwu nsogbu ahụ ike. Onye ọkachamara ahụ ga-eme ọmụmụ ma gwa gị ọ bụrụ na ọ na-emebi ma ọ bụ na ọ bụghị na-amalite ụdị slimming usoro.
M wee hapụ gị vidiyo iji nyere gị aka ịmatakwu banyere Nri achicha ama ama na ihe bụ uru ya na ihe niile mmechi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Akwukwo nri
Ndụmọdụ iji nwee obi ụtọ
Gịnị mere o ji dị ezigbo mkpa na ndị agadi agakwuru dọkịta ezé?